Cactus Factory, Suppliers - China Cactus Manufacturers
1, sechiedza, kusanaya kwemvura, mumvuri kuramba, kudzivisa mvura. Chera chirimwa uye uise muzuva kwemwedzi 1-2, haisati yafa, asi mvura yakareba inotungamirira kumidzi yakaora uye mashizha akaora, zvakare. kunyanya kuratidzwa nezuva kucharega kukura.
2, seyakasununguka yakaorera, yakanyoroveswa, yakapfuma mujecha reorganic, dzivisa inorema yakabatana ivhu.Kukura kwakajairika muvhu rakaoma, rakashata, asi rakaonda yero kana grey mashizha.
sevhu rakaorera uye rakanyorova, rinotya kusanaya kwemvura nemvura, rinofanirwa kusarudza ivhu rakasununguka, rakapfuma mune organic zvinhu, mvura yakanaka, aeration kuita, uye kuchengetwa kwemvura, fertility retention sandy loam.The pH range ye5.6 - 7.2 inogona kudyarwa, asi 6.8 kusvika 7.2 ine acidic zvishoma kune ivhu rine alkaline zvishoma zviri nani.
Epithelantha Micromeris idiki globose kana terete, verrucous process idiki spiral arrangement.Iyo prickles yakatenderedza nzvimbo yekukura inowedzera dense uye chena, uye chirimwa chinenge chakafukidzwa nechena nyoro prickles.Mapururu matsva ari pamusoro pedenderedzwa renyika yekare yemwedzi anozoreba uye akashata.
Chirimwa chine oblate denderedzwa uye chakatenderedzwa, 5 ~ 8cm mudhayamita, denderedzwa rakakamurwa kuita 6 ~ 10 akafuratira kutenderera mipendero ne6 ~ 10 miforo isina kudzika.
Hapana matinji, matinji ane mvere chena dzemvere dzemakwai.Maruva anotakurwa pamusoro pegirobhu, akaita sefunnel, yero, pakati pemaruva matsvuku, 3 ~ 4cm pakufara.
Kufanana nemhoteredzo yakaoma, kusanaya kwemvura, kufanana nekupisa kwezuva kwakazara musiyano, mvura yakanaka yakapfuma muvhu rejecha recalcareous.
Native kumaodzanyemba kweUnited States, kuchamhembe kweMexico, kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva nepakati nzvimbo.
Kudyara nekubatanidza zvinowanzoshandiswa pakuparadzira.
Kudzvara:inowanzoshandiswa muchirimo mukati mehari yekudyara, kudyara 3 ~ 5 mazuva mushure mekumera, mbesa dzinogona kutumbuka makore 3 ~ 4 gare gare.
Kubatanidza:muna Chivabvu-Chikumi, maruva anowanzo shandiswa mubhora kana kuyera zuva semudzi, scion nembeu dzembeu, mushure megore rechipiri anogona kutumbuka.
Nyeredzi yakaita semvura, gaka rakachena rezvirimwa rakakurisa, zviyo zvakakura zvakaoma nekukasira, capillary midzi haigone kubatika, inokanganisa kunyudzwa kwemvura kwezvinovaka muviri, zvichiita kuti capillary midzi idzokorore midzi yebvudzi, kufa, midzi uye mamiriro emvura kuwedzera. zvimwe zvidiki zvakamisikidzwa zvinhu uye peat zvinogona kuvandudza zvakanyanya kukura kwecapillary midzi yekunwisa nharaunda, kuitira kusimudza yakasvibirira mudzi ~
Kunyangwe homwe yenyeredzi ichida mvura, hazvireve kuti mvura inogona kuunganidzwa.Kana homwe yenyeredzi ichichengetedzwa muzhizha, kana mwenje wakasimba, unofanirwa kuve wakanyatso mumvuri, zvikasadaro zviri nyore kupiswa nezuva, uye zvinodikanwa kudzivirira kupuruzira ivhu pakudiridza.
Nyeredzi yehomwe inofanira kudiridzwa kakawanda munguva yekukura. Miti yevanhu vakuru inogona kuchinjwa kamwe chete pamakore mashanu kusvika matanhatu.
Inoda nzvimbo inodziya, yakaoma uye ine zuva.
Iyo ivhu ine porous, inofema uye yakanyatsodonhedzwa uye calcareous sandy ivhu ndiyo yakanyanya kunaka.Iyo yakanyanya kukura tembiricha ndeye 18-25 ℃, inotonhora zvakanyanya, asi tembiricha yechando haigone kuve isingasviki 5 ℃, zvikasadaro ganda richakwinya, rinoburitsa chloasma. , zvinorema zvichafa nechando;
Inowedzerawo kupikisa hafu yemumvuri uye kusanaya kwemvura, kutya kwemvura yakanyorova saka edza kudzora kudiridza, ning yakaoma haina kunyorova, uyewo inopesana nechiedza chakasimba, asi zhizha rinoda mumvuri wakakodzera.
Iyo inokura mwaka (chirimo nechirimo) inogona kudiridzwa kwemavhiki maviri ega ega (kuteerera kune chaiyo mamiriro ekutonga, yeuka kuti Ning yakaoma isina kunyorova, inogona kunyatsochengeta hari ivhu rakanyorova), matsutso uye mwaka wechando unodiwa kuchengetedza poto ivhu rakaoma.
Inonyanya kudyara, inogona kusarudzwa mukutanga kwekudyara kwechirimo, yakanyanya kumera tembiricha inenge 21 ℃, kumera kwepentagon wong uye luan jade yakakwira.
Inowedzerawo kupikisa hafu yemumvuri uye kusanaya kwemvura, kutya kwemvura yakanyorova saka edza kudzora kudiridza, ning yakaoma haina kunyorova, iyo pentagon wong uye luan jade zvakare inopokana nechiedza chakasimba, asi chirimo chinoda mumvuri wakakodzera.
Kuberekwa kweAstrophytum myriostigma kunonyanya kudzvara, kunogona kusarudzwa mukutanga kwekudyara kwechirimo, tembiricha yekumera yakanakisa ingangoita 21 ℃, kumera kwepentagon wong uye luan jade yakati wandei.
Muswe wetsoko, cactus, inogara isingaperi mbiru yakarembera inonamira chirimwa, nekuti chimiro chayo chakafanana nemuswe wegava, iro rinozivikanwawo se "nine-tailed fox" kana "millennium fox dhimoni".
Maumbirwo eruva rembiru yemuswe wetsoko akafanana neasingafi, uye ruva racho rinogara richitumbuka uye harizombovhari usiku.Muswe wetsoko une mukume uye muchero wakaibva unovigwa pakati pemizongoza yakapfava.Yakanyanya kukora ine tsono. Bvudzi izvo zvakaoma kutenda kuti ichirimwa.Maruva acho akanga akatsvuka kupenya.Mvere dzemuswe wetsoko mbiru dzakachena, dzakareba uye dzakapfava, uye hadzina kubaya maoko.
Tsoko muswe mbiru iyi yakasiyana-siyana haigoni kupikisa kutarisana nezuva, kukura mvura yakaoma, zvishoma sezvinobvira. Kazhinji ivhu rakaoma kwazvo, mvura chete, inodururwa. kunyorovesa musoro, kufefetedza hakuna kunaka uye kuri nyore kuora.
vanoda kuchengetedza chiedza chakakwana, havadi mumvuri.
Kudiridza, kunofanira kunge kwakaoma uye kunyorova kumwe kunwisa, uye usaite mvura kubva kumusoro kwemusoro, seguruva, inogona kushambidzwa uye kufefeterwa kuoma.
Zvakakosha kuchengetedza imwe ventilation.
Fertilization kune nhamba shoma yenguva, inogona kuderedza chidimbu chefetireza mushure mekudiridza bheseni ivhu.
Haidziviriri kutonhora uye inoda kuchengetwa iri pamusoro pe10 ℃.
Cactus zvirimwa zve genus isina kupfeka calyx bhora, ndeimwe yered tsvuku gore bhora musiyano peony, kubatanidza, variegated mhando tsvuku gore bhora kubva kuParaguay, Fei sphere peony zvinomera sezvitsvuku, orenji, pink kana yepepuru ruvara, nyore kubereka mbeu bhora. , ine mipendero misere, ine mbiri yakachinjika, idiki, isina muzongoza, inopenya mizongoza mipfupi iri nyore kudonha, inotumbuka muchirimo nechirimo,Maruva epingi yakaita sefunnel, inozvarwa pamuromo weminzwa, maruva anogara akavhurika. panguva imwe.
Early spherical inokura zvishoma nezvishoma cylindrical, bhora dhayamita 6-10 cm, 10-25 cm kureba, rima rakasvibirira muviri ruvara.Ne 30-35 mbabvu dzisina kudzika, mbabvu dzine diki verrucous protrusions, spines spacing 5~8mm.Radiate 40 perispines, minzwa michena matete uye mapfupi.Medium spines 3 ~ 4, ane imwe kana zvakadaro yepakati spines yakatsvuka shava.Maruva machena emudhorobha madiki muchirimo nechirimo, pamusoro pemaruva eyero, maruva dhayamita angangoita 4 cm, yakachinjika, chubhu yakapfava. bvudzi uye rima setae.
Izvi zvakasiyana-siyana hazvina kunyanya kupikisa kutarisana nezuva, mvura yakaoma panguva yekukura, zvishoma sezvinobvira, kana kuti zviri nyore kukura, kwete chiedza chakakwana chiri nyore kukura kureba.Kubereka kunonyanya kudyara, kunyanya kubatanidza musika, asi kukura kwekudyara kunonoka, kuva nemoyo murefu.Spring, zhizha, matsutso mwaka kunwisa asura succulents chero bedzi kutevera yakaoma kunyatsodiridza kunogona kuva.Asi kudiridza muchando kunofanira kunyatsodzorwa, kudzivirira uye kutonga kwechando chechando. .
Inofarira nharaunda inodziya, yakaoma uye yezuva, asuras inonaka inogona kumira kusanaya kwemvura, kudzivirira hunyoro, kwete kutonhora, hapana yakajeka nguva yekurara.
2, Ivhu zvinodiwa
Inoda ivhu rinofema, saka ivhu riri peat rakasanganiswa cinder rinogona kuva, uyezve, zvinokurudzirwa kuisa matombo madiki kana pumice pavhu, zvese kuti ive nechokwadi chekufema uye kunaka.
3. Zvido zvemwenje
Inogona kuonekwa kune chiedza chezuva chakazara mumwaka yose kunze kwezhizha.Kana dzakakura munzvimbo ine zuva, zvirimwa zve asura zvinoonekwa zvakatsvuka.Kana zuva risiri kupenya, zvirimwa zve asura zvichaonekwa zvakasvibirira uye zvinomera nyore.
4, Kudiridza zvinodiwa
Chitubu, zhizha, matsutso mwaka kudiridza asura succulents chero bedzi kutevera yakaoma kunyatsodiridza inogona.Asi kudiridza muchando kunofanira kunyatsodzorwa, kudzivirira uye kudzora chando frostbite.v
Astrophytum myriostigma inoda nzvimbo inodziya, yakaoma uye ine zuva.
Iyo ivhu ine porous, inofema uye yakanyatsodonhedzwa uye calcareous sandy ivhu ndiyo yakanyanya kunaka.Iyo yakanyanya kukura tembiricha ndeye 18-25 ℃, inotonhora zvakanyanya, asi tembiricha yechando haigone kuve isingasviki 5 ℃, zvikasadaro ganda richakwinya, rinoburitsa chloasma. , inorema ichaomesa nechando kusvika pakufa;Astrophytum myriostigma inonyanya kushingirira kuhafu yemumvuri uye kusanaya kwemvura, kutya mvura kunyorova saka edza kudzora kudiridza, ning yakaoma isanyorove, pentagon wong uye luan jade zvakare inoshingirira kuchiedza chakasimba, asi zhizha rinoda mumvuri wakakodzera.Astrophytum myriostigmag yekukura mwaka (chirimo nezhizha) inogona kudiridzwa kwemavhiki maviri ega ega (kuteerera mamiriro chaiwo ekutonga, yeuka kuti ning yakaoma isina kunyorova, inogona kunyatsochengeta hari ivhu rakanyorova), matsutso. uye mwaka wechando unodiwa kuchengetedza ivhu rehari yakaoma.